GCC yagadzira yekuvandudza kune yayo copyright kupihwa mutemo | Linux Vakapindwa muropa
GCC Inotungamira Komiti yakatenderwa Mazuva mashoma apfuura kupera kwekumanikidzirwa kuchinjiswa kwekodhi muridzi kodzero kune iyo Open Source Foundation. Neshanduko iyi nyowani, vagadziri vanoshuvira kuendesa shanduko kuGCC havachadiwi kusaina CLA neFree Software Foundation, ndiko kuti, kutora chikamu mukusimudzira, kubva zvino zvichienda mberi, unogona chete kusimbisa kuti musimudziri ane kodzero yekuendesa kodhi uye haiyedze kukodzera kodhi yemumwe munhu.
Vagadziri vasingade kusaina chibvumirano cheCLA pamwe neFree Software Foundation vane mukana wekushandisa mazwi Chitupa Chekuvandudza Chekutanga (DCO), izvo zvakashandiswa kubvira 2004 kana uchichinja shanduko kuLinux kernel.
Zvinoenderana nemitemo yeDCO, kuteedzera kwemunyori kunoitwa nekubatanidza tambo "Yakasainwa na: zita rekuvandudza uye email" kune imwe neimwe shanduko. Nekubatanidza siginecha iyi pachigamba, musimudziri anosimbisa kunyora kwake kodhi yakadzoserwa uye anotambira kugoverwa kwayo sechikamu chepurojekiti kana sechikamu chekodhi iri pasi peirisensi yemahara.
Kana zvakamboitika vagadziri vakasaina yakasarudzika chibvumirano chinoendesa ese maruramiro - muridzi wekodhi kune Open Source Foundation, ikozvino chibvumirano chakasainwa pamadiro uye musimudziri anogona kuchengetedza kodzero yekodhi yake. Naizvozvo, kodzero dzevaridzi kukodhi yeGCC zvino ichagoverwa pakati peiyo Open Source Foundation nevatori vechikamu vebudiriro vasina kusaina chibvumirano
Kugoverwa kwakadaro kunonetsa shanduko maererano nekuparadzirwa kweprojekti, sezvo uchichinja rezinesi zvichave zvakakodzera kuti uwane mvumo yemunhu wega wemugadziri kuti haina kugovera kodzero kune Open Source Foundation. Panguva imwecheteyo, kumiswa kwekuchinjirwa kwekodzero kuFree Software Foundation hakuzoomesera shanduko inogona kuitika kune shanduro dzeramangwana rezinesi reGPL, nekuti GCC inogoverwa pasi pe "GPLv3 kana newer vhezheni" rezinesi, iyo inobvumidza kuchinja iyo rezinesi reGPLv4 isina mvumo yakaparadzana kubva kune mumwe nemumwe mugadziri.
Nezve izvo zvakanaka mhedzisiro kwekuramba kwekumanikidza kuchinjirwa kwekodzero kukodhi, kune kuwedzera kwekukwezva kwekutora chikamu mukusimudzira kweCCG nemakambani nevashandi vemakambani makuru, avo vaimboda kuwedzera kurongedza kusaina kwechibvumirano muzviitiko zvakasiyana uye nemabasa epamutemo. Semuyenzaniso,
Nekuisa kodzero yekodzero mumawoko mamwe chete, iyo Open Source Foundation yakaita sechivimbiso chekuchengetedza kusagadzikana kwemutemo wekuparadzira kodhi yeprojekiti chete pasi pemarezinesi emahara uye kuita basa rekuchengetedza nharaunda kubva mukuchinja nzira. Pakutanga zvakarongwa kubva ku kuvandudzwa kweprojekiti (semuenzaniso, kwakavhara kuisirwa kuisirwa kweyekutengesa / rezinesi mbiri kana kuvhurwa kweyakavharwa zvigadzirwa zvechibvumirano pasi pechibvumirano chakasiyana nevanyori vekodhi).
La Yemahara Software Foundation inogona zvakare kutora chikamu mukugadzirisa kwemakakatanwa epamutemo pachinzvimbo chevagadziri uye ita sarudzo wega iwe nezve kushandura marayisensi mamiriro (semuenzaniso, kumanikidza iyo shanduko kune itsva vhezheni yeGPL rezinesi).
Vamwe vagadziri vakashoropodzwa nezviito zvekomiti inotungamira yeGCC, iyo yakabvuma sarudzo isina kutaurirana munharaunda. Nenzira, hurukuro yaive, asi akafunga kuenderera mberi nekubatana neyaimbova GCC GNU Project uye iyo Foundation yeAIT. Mhedzisiro yeiyi hurukuro inogona kuteverwa kumutsara wakataurwa mukuzivisa "GCC yakagadzirwa sechikamu cheiyo chirongwa cheGNU, asi yakura kuita seprojekti yakaparadzana."
Kunetsekana ndekwekuti kana pasina muridzi wepakati wekodhi yese, nyonganiso inogona kumuka pakutaurirana nyaya dzerezinesi. Kana zvakamboitika zvese zvataurwa pamusoro pekutyorwa kwemitemo yelayisensi zvakagadziriswa kuburikidza nekudyidzana nesangano, izvozvi mhedzisiro yekutyorwa, kusanganisira zvisiri zvechinangwa, zvinova zvisingatarisirwe uye zvinoda kubvumirana nemunhu mumwe nemumwe anotora chikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GCC yagadzira yekuvandudza kune yayo copyright kupihwa mutemo